I-Linux ivakashelwa kakhulu kusuka kumaphi amazwe? + OS + Iziphequluli | Kusuka kuLinux
I-Linux ivakashelwa kakhulu kusuka kumaphi amazwe? + OS + Iziphequluli
Muva nje basikisela ukuthi sibeka izibalo ze <° I-Linux, ikakhulukazi amazwe lapho sivakashelwa khona.
Yebo, lapha izicelo ezanelisayo ngishiya izibalo ezithile zesayithi 🙂
1 Amazwe lapho sithole khona izivakashi eziningi kusukela savula:
2 Amazwe lapho sithole khona izivakashi eziningi emahoreni angama-24 adlule:
2.1 Iziphequluli ezisetshenziswa kakhulu ku-Desdelinux
3 Izinhlelo Zokusebenza Zezivakashi:
Amazwe lapho sithole khona izivakashi eziningi kusukela savula:
Amazwe lapho sithole khona izivakashi eziningi emahoreni angama-24 adlule:
Ukwazi iziphequluli ezisetshenziswa kakhulu, ungafunda le ndatshana kusukela ngo-Okthoba 28 odlule:
Iziphequluli ezisetshenziswa kakhulu ku-Desdelinux
Izinhlelo Zokusebenza Zezivakashi:
Hhayi, akukho okunye ongangeza ... lapho unedatha, njengoba ubona, España Muva nje nguyena osiletha isivakashi esiningi 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Linux ivakashelwa kakhulu kusuka kumaphi amazwe? + OS + Iziphequluli
Ngiyethemba ukuthi labo abavela eColombia bangamantombazane amahle njenge-blonde yaseColombia esikhungweni sami nokuthi benginokungabaza okukhulu nge-JAJAJAJAJAJAJAJA.
Okungacaci kimi yi-USA, uma bengakhulumi iSpanishi kungani befunda ibhulogi ngeSpanishi? Ngeke bathole nganoma yini
Uff ezogingqa i-HAHA. Cha, abantu baseColombia AKUFANELE babe ngamantombazane, eColombia kunenhlangano evuna i-SWL njengoba kunjalo nakwamanye amazwe amaningi.
Futhi HAHAHAHA ndoda, e-US bakhuluma isiNgisi yebo, kodwa futhi sooooo kakhulu iSpanish HAHA.
Kulungile, eCalifornia naseFlorida kodwa kabi, hhayi njengathi
«Ngo-2006, amaLatinos ayizigidi ezingama-44,3 ayehlala e-United States, okwenza kube yisizwe sesithathu esikhulu kunazo zonke eLatin America emhlabeni, kanye neColombia, ngaphezu kwamazwe anjenge-Argentina (39 million), iVenezuela (28 million) nePeru (28 million) ), futhi kuphela kweqiwa yiBrazil (183 million) neMexico (107 million). Leli qiniso lenza i-United States izwe lesibili elinamaHispanics amaningi eMelika yonkana, futhi maduzane lizodlula iSpain njengezwe lesibili ngenani lamaSpanishi.7 »(Wikipedia).
Kufanele ubeke uhlelo lokusebenza olukhombisa nsuku zonke inani lezivakashi nohlu lwamazwe, amanye aze abe ne-planisphere lapho izivakashi nezwe lendabuko liphawulwa khona, vele inqobo nje uma kuningi kakhulu ongakubuza.
Makakwenze kusasa, ngakho-ke sifaka usuku lwakhe lokuzalwa HAHAHA
Ukube bewazi nje ... kusasa ngihlela ukuchitha usuku lonke ehhovisi HAHA.
Angikho kude ne-emo, kepha ngicabanga ukuthi lolo suku lokuzalwa lungelinye nje usuku olujwayelekile, ngingumuntu oyinqaba u-HAHA.
Ngabe usuku lwakho lokuzalwa belungengu-22? Noma ufuna izipho ngaphambi kwesikhathi? Kodwa-ke, uma kwenzeka izimpukane: SANDY SIYAKUTHOKOZELA NGOSUKU LAKHO, UKUTHI UNAYO NGENJABULO EMPILO, NGAPHANDLE KOKUXHUMANA LONKE USUKU, INJABULO, INJABULO, INJABULO !!!! Ehhhhhh ...
Qaphela: Thatha intombi yakho ngengalo uphumule kwi-laptop nakwikhompiyutha yomsebenzi ..
HAHAHAHAHA udidekile izinombolo, usuku lwami lokuzalwa lungo-20 futhi ngineminyaka engama-22 ubudala 😀
Futhi sahlukana hehe, ngakho-ke uyazi, njengangaphambili kukaJUAS JUAS JUAS !!!
Phakathi kwethu sobabili, ngicabanga ukuyithumela ihologram yentombazane enjengokuthanda kwayo, umshwalense ompofu ubiza uManuela, HAHAHAHA.
HAHAHAHAHAHAHA ukube bewazi ukuthi kunini ngashayela uManuela ucingo, ubungamangala HAHAHA.
Futhi, ngicabanga ukuthi senza kakhulu i-JAJAJAJAJAJAJA !!!!!!
Angizange ngivakashele uManuela isikhathi eside, kepha ngijwayele, uma ungangithumela intombazane engazi nanini hahahaha
Lapho-ke uhlushwa inkinga yomshado sibonga omamezala.
Uma ngithi into ethile nguKK, angikaze ngiphutha. Lapho unomlingani wakho, oneminyaka engama-22 ngaphandle kwentombi.
Futhi njengoba esemdala kakhulu ukuthi angaba nentombi
Inkinga ngomlingani wami akukhona ukuthi uyisitabane noma yini enjalo, kodwa ukuthi uyamangaza kakhulu futhi akabekezeleleki. Izintombi azihlali kuye futhi kubonakala kimi, lokho kungenxa yokuthi uma besondelene naye ukhipha isenzo esincane:
Well, konke kuzoba shit! Hahaha
Kuyaxaka kulungile, kepha akubekezeleleki ... Angicabangi kanjalo HAHA.
Woza, ngangineminyaka ecishe ibe ngu-2 nge-ex yami yangaphambilini, ngekhefu ngafunda ukuthi akudingeki ngibekezelele ubunzima noma isimilo sokuziphatha kunoma ngubani, yingakho abokugcina bengahlali isikhathi eside, yize izithembiso zamuva 😉
Ngiyakuqinisekisa ukuthi bazohlala ngaphansi kuka-KZKG ^ Gaara, ngicabanga ukuthi bebengeke baqhubeke isikhathi esingaphezu kwesonto noma izinsuku eziyi-15 nami, kepha lowo ongelona i-blonde mdala futhi uma engenawo amehlo aluhlaza okwesibhakabhaka noma uma akuyona into encane ...
Futhi ngakho konke kuya shit hahahaha
laba bakamuva bayathembisa
Uzongitshela ngemuva kwesikhashana
Okwamanje, anginaso isidingo sokubhala okugxeka omamezala, njengoba kwakumele kwenziwe uzakwethu othile… HAHAHAJAJAJA !!!!!!
Ngendlela, kusamele ngibhale ama-athikili amaningi, kepha phakathi kwento enye nenye angikwazanga, ngine-SUPER enemininingwane enemininingwane ye-DD (dd command), nezinye izindatshana, futhi kufanele senze ezinye izithonjana i-distros (uKubuntu ungowokuqala engizomenza, ngizokufaka isikhashana), uff ... futhi HAHA.
Cabanga ngomhlahlandlela wokufakwa kwe-Arch kanye nangemuva kokufakwa njengokuchaza ngangokunokwenzeka.
HAHA angazi, angilungile emihlahlandlela ebanzi ... elav nguyena obenza babe yi-HAHA ehamba phambili, ake sibone ukuthi uyifaka nini kabusha i-Arch ukusithokozisa hahaha
Uma lokhu ofuna ukukwenza ukukufaka, bheka i-ArchBang eyodwa ku-uL (ingeyami) futhi ngingabeka amakhodi esigabeni sokunamathisela
Bengingakuqondi kahle haha, ungachaza kangcono? ^ - ^ U
Ngiyabonga ngokunaka isiphakamiso. Kunzima ukuba nomqondo ocacile we-OS esetshenzisiwe lapho ngaphezulu kwedatha engama-70% ingaziwa: s
Futhi, ngisho naseJalimane bawafunda, eh, heh.
Lutho, injabulo 🙂
U-HAHA yebo, naseJalimane ... bewazi yini ukuthi ulimi lwesibili olukhulunywa kakhulu eJalimane yiSpanish? 😀
Cha, uma iSpanishi ikhona yonke indawo .. Ngakho-ke ngiyazibuza ukuthi kungani isihogo sifunde olunye ulimi? Vumela abanye bafunde iSpanishi nenkathi hahaha
Haha, ake sibheke ukuthi amaShayina awasho yini okufanayo, ngoba isiMandarin siwulimi olunezikhulumi eziningi emhlabeni, heh.
Ngokuzimisela, ngiyethemba kuwo wonke amazwe bazosifundisa ulimi olungathathi hlangothi lokuxhumana, (kwawo wonke umuntu futhi akekho) njenge-Esperanto.
Yini leyo yokungathathi hlangothi? Bengicabanga ukuthi i-Esperanto ivela kuphela ezweni elithile laseYurophu kulawa abamhlophe kuwo ngohlelo lweTwilight
Isibindi i-Esperanto wulimi olwenziwe ngudokotela wezifo zamehlo 😀 yini into, angikhumbuli ukuthi kungani ngiyikholwa, kepha umfana wayengudokotela wamehlo
Imago isendaweni ... Juajajajajajajaa
kulo lonke lolo hlu kufakwa iTico !!!!!!
HAHA ngenjabulo, uTico ungeze ... Ngizokwenza nokubalwa kwabantu HAHAHAHAHA
hahahaha, ngiyabonga kakhulu !!!!
UCristhian Duran kusho
Ngingomunye walabo abavakashela e-Argentina
Phendula uCristhian Duran
Futhi kusuka eWinbug 😀
Kuyintokozo ukuba nawe lapha 😀
Futhi kuyaziswa ... 😀
Ngihlala ngithola izindatshana ezithokozisayo lapha ngakho-ke ngidlula kaningi
NOOO, NO VALUE, I'm using TUQUITO, NO UBUNTU 😀
Ngifuna ukuthi kuvele isithonjana seTuquito hhayi Ubuntu 😀 hahaha
I-Tuquito ukusatshalaliswa kwe-Argentina, kuhle kakhulu impela, okususelwa ku-Ubuntu. Futhi ngo-Eduardo, "ongigxekayo" ngisebenzisa iWindows, ngimtshela ukuthi kungokwesikhashana, aze afunde ukwenza uhlelo lwamahhala futhi azinikele kulo 😀
Akukho mqondo ngaleyo distro HAHA.
Ngithumele ku-imeyili yami (kzkggaara@myopera.com) i-SVG yelogo yale distro, ukwenza isithonjana futhi lapho senza ukuvuselelwa, khona-ke iTuquito izovela esikhundleni se-Ubuntu 😀
Yi-distro yase-Argentina uMnu Gaara, kufanelekile ukuthi ungazi
Akukho lutho, owaziyo-konke akuphuthele lokho hahaha.
I-HAHA inike ukuthi iphuze ___ ________ hahahaha, kunamakhulu ama-distros akhona, angenakwenzeka ukubazi bonke HAHA.
Lokhu okunye kokusatshalaliswa engisazokuhlola. Njengoba ngiyifunda isuselwe ku-Ubuntu nakuDebian, ngakho-ke uma ngikwazi ukusebenzisa lokhu esengikwenzile.
NgoMsombuluko ngikuthumelela i-svg uma ufuna, manje sengiyinkulungwane nge-laburo. Kepha uma ufuna futhi ulusizo, ngizokunikeza isixhumanisi sikuphi isithombe seTuquito
ngaphezulu ilogo eluhlaza okwesibhakabhaka blue
Kuhle kakhulu ngesinyathelo, abanye bebengathi, shit 🙁 bese ungenza ngihambe hahahaha okubi kakhulu okwenzekayo, futhi bayakwazi impela
Ngakolunye uhlangothi, engikuthanda kakhulu ngale distro ukuthi inenethiwekhi yayo yokuxhumana nabantu kukhona abantu abakhulu abakusiza kakhulu. Cishe nsuku zonke umfana ongomunye wabathuthukisi uyaxhuma futhi naye unaso isixazululo ngokuqinisekile 😀 uba nengxoxo lapho kuhlale kunabantu abaxhumene khona emini, iqiniso ukuthi kungenza ngikhethe leyo distro ethola usizo Ngidinga njalo ngokushesha, ngolimi lwami kanye nabantu abathanda ukusiza (ngokujwayelekile kwenzeka ngabo bonke abasebenzisi be-linux)
Ok akunankinga 😀
Ngizobona ukuthi ngabe ngifaka yini uKubuntu noPardus kuma-distros asekelwayo njengamanje haha.
Futhi… HAHA akunjalo mngani, lapha awusoze wabona imibono efana naleyo, le bhulogi izama ukusiza abasebenzisi / abafundi, awusoze wabona impendulo engemihle evela kithi 🙂
Hahaha ngiyabona ukuthi ugcina ukudida ukwabiwa ngezinhlelo zokusebenza.
Yini ozoyinika uKZKG ^ Gaara ngosuku lwakhe lokuzalwa? Sheshisa yini namuhla hahaha
Hahaha ungamniki lutho, kepha ngithumele amazwi enduduzo ngokuguga.
Halala Gaara. Noma kungusuku olulodwa nje kuphela, "usuku olulodwa ngaphezulu usuku olulodwa ngaphezulu"
Ngiyabonga, indlela ebabazekayo yokuyibuka kepha ... akusizi haha, "usuku olulodwa futhi" usuku olulodwa lokuzigweba "... kepha angikaze ngikhulume lutho ngaphambili, angizithandi izinsuku zami zokuzalwa , Ngihlala nginesimo esibi HAHA.
Ungayibona njengosuku olulodwa ngaphezulu noma usuku olulodwa olungaphansi ukuze uphile. 😀
Uthi yebo, yehlisa
Ngibonile ukuthi i-distro esetshenziswa kakhulu ngabasebenzisi abavakashela leli khasi yi-Arc Linux neLinux Mint, mahle kangakanani lawa ma-distros? ……
Ngifunde indatshana lapha encoma ubunto kulabo abaqala emhlabeni weLinux, kepha kwenza mehluko muni…. Uma ngifuna ukusebenzisa i-linux mint noma i-Arc linux ekuqaleni kwami? ...
Ngikubhale kabi lokho, kepha okufanayo nakuwe.
Ukuqala ngincoma iMageia, Arch kamuva
Ngeke ngincome i-Arch uma uyi-newbie, i-distro eningi kakhulu, kepha iyinkimbinkimbi kakhulu kubasebenzisi abangathuthukile.
Ngingancoma i-LMDE (iLinux Mint Debian Edition) uma uthanda iGnome, futhi uma uthanda i-KDE ngaphezulu ngincoma uChakra.
Chakra? Uma ufika kuma-partitions uzodideka
Akekho okhuluma ngeFedora…. Qala ngale distro… ..ucabangani ngakho?
Ngiyisebenzise isikhashana futhi ngiyayithanda, iyona eletha izindaba eziningi kakhulu kunguqulo ngayinye
Ngikhetha ukuthi i-Arch Linux yiyo eletha izindaba eziningi nsuku zonke, yize ngingakaze ngibe nokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu ne-fedora ngiyazi abantu abathile abasile abayisebenzisayo futhi bathi ingcono kakhulu futhi bangabantu abaziyo ngalo mhlaba , ngakho-ke inezinhlonipho zami.
Kulungile, i-Opera Turbo ebabayo inginike imibono emibili, ake sibheke ukuthi ngiyaqeda yini ukuthola idatha kwikhompyutha ngeVi ta futhi ngafaka i-Arch
Sicela ufunde izimpawu manje
Lutho !!! Khishwa ku-Taliban Free Software Troll Syndicate ngokusebenzisa i-winbug.
Kufanele ukuthi ushintshe iFirefox UserAgent kuWindows gggrrrrr
othile ungixhumanisa neLinux Mint Debian nedeskithophu yeXfce ngeSpanishi….?
Kufanele ulande idiski nge-XFCE ekhasini le-Debian ngokuya ngokwakhiwa kwakho
othile ungixhumanisa neLinux Mint Debian nedeskithophu yeXfce ngeSpanishi….? Ngihamba nalena ukuqala kwami ​​ke… ..
Lapha esinye isivakashi esivela eSpain 🙂
Yize ngingaphawuli kakhulu, inkampani yami u-Elav iyazi ukuthi ngithembekile kuye 😉
Ukwanga kubo bonke
Kukhona uhlelo lwe-linux ongadala ngalo uhlelo lokusebenza olusebenza kuwo womabili amawindi ne-linux.
Ngifuna ukudala eyodwa yenkampani engizoyakha, futhi ngifuna ukudala uhlelo lokusebenza engingaphatha ngalo inkampani, i-inventory, i-invoyisi, i-oda lokuthenga ... njll.
noma kungcono uma isivele ikhona ...
Ungazi ukuthi lokho kukhona kepha ungakuhlela no-Anjuta noGlade
Kuthiwani nge-C kanye / noma i-C ++ ANSI?
Kulezo zinto, kusetshenziswa imininingwane yolwazi, esemaseva bese kuthi, ngokusebenzisa iwebhusayithi ehlelwe wedwa, uhlanganyele ne-database. Lokhu kuzokuvumela ukuthi ngaphandle kwe-OS oyisebenzisayo, ungenza okufunayo 🙂
Ukuziqhenya ngokuba yingxenye ye-5,9% evela ku-CHILE !!
Halala! nokuthi le bhulogi ayipheli.
Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula, yize ezinye izinsuku singashicileli lutho noma cishe lutho, ungakhathazeki ... asikaze sicabange umzuzwana owodwa ukushiya le bhulogi (noma yini ezayo lol) 😀
Ngaphambi kokuthi ngiphawule kusuka ku-LMDE XFCE futhi i-plugin yamazwana ayikakutholi kanjalo kodwa njengeLinux
Ake sibheke ukuthi manje ePardus kunesithonjana seFelina 🙂
Yebo, kukhona iMexico phakathi kwabathathu bokuqala, iqiniso ukuthi bambalwa kithi abasebenzisa iLinux. Kepha siyawubona umsebenzi omuhle, imikhonzo.
Yebo, wamukelekile futhi ujabulele i-blog 🙂
HAHA ngiyabonga "sibona umsebenzi omuhle" ... injabulo yangempela 😀
Yebo, ngaphambi kokuthi nge-LMDE noma ngePardus i-UserAgent ingangazi
Ukubona manje kusuka ku-Debian Squeeze naku-Google Chrome 😛
Akukho lutho noma hahaha. Njalo kufanele ukuguqule ku-Debian ngicabanga. Ngendlela, kuhambe kanjani noPardus ne-LMDE?
Angazi ukuthi kungani i-LMDE ingeke ikubone, ngabe i-UserAgent imisiwe kanjani?
UPardus namanje akanakho ukusekelwa, sengivele ngenza isithonjana nakho konke kepha ngidinga ukukufaka ^ _ ^ U
Ungawathola kanjani amawebhusayithi nge-imeyili?
Ukuxoxisana ngesibindi noMark Shuttlewoth [Amahlaya]